Vaovao - Ny mampiavaka ny gorodona hazo tena izy
Ny gorodona hazo tena izy dia ny fanodinana aorian'ny fanapahana azy mivantana amin'ny hazo voajanahary ary nanjary, nitazona ny lamina haingon-trano miaraka amin'ny hazo solid sy voajanahary tsara tarehy tanteraka, satria tsy nampiasa solika adhesive hampitahana ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny ankapobeny. Ny gorodona vita amin'ny hazo tena izy dia mila mametraka perla rehefa mametraka matetika, ampio ny fahaizan'ny tena hazo tena tsara ihany koa, noho izany ny fahatsapana an-kavoana amin'ny gorodona hazo tena izy dia tena mahazo aina.
Ny gorodona hazo tena izy dia marefo kokoa amin'ny fampiasana azy, raha hazo ratsy izy io, ny tontolo maina loatra na mando loatra dia mety hanapotika ny fiovan'ny toetrany. Ny mari-pahaizana manohitra ny akanjo dia ambany ihany koa, tsy afaka manintona fanaka eo aminy, raha tsy izany dia tsy manao ny kiraro eny ivelany mba hiakatra amin'ny gorodona hazo tena izy, hanao izany angamba. Ny fitazonana ny velarantanin'ny fanambon'ny hazo tena izy dia mamirapiratra, tsara kokoa ny 3 volana na toy izany ny savoka.
Ny tombony amin'ny gorodona hazo tena izy
Fanamafisam-peo sy fanamafisana ny hafanana
Ny fitaovana matevina vita amin'ny hazo mafy dia mafy, mitandrina amin'ny firafitry ny kofehin'ny hazo, ny fitarihana hafanana ambany, ny fanakanana ny feo sy ny hafanana, tsara kokoa noho ny simenitra, taila tanimanga ary vy. Satria ity gorodona hazo ity dia misy feo mifoka feo, insulation feo, mampihena ny tsindry amin'ny feo, mampihena ny fiasan'ny fotoana sisa tavela, mampihena ny voka-dratsy ateraky ny tabataba ataon'ny besinimaro.
Amboary ny hamandoana
Ny mampiavaka ny hazo amin'ny gorodona hazo tena izy dia, maina ny toetr'andro, mamoaka ny hamandoan'ny atin'ny hazo; Amin'ny toetr'andro mando dia mifoka hamandoana avy amin'ny rivotra ny hazo. Ny lalotra hazo dia mandray ary mamoaka hamandoana, satria ity gorodona hazo ity dia afaka manitsy ny maripana anaty, ny hamandoana ho azy, mampihena ny fisian'ny aretina rheumatism, ary satria kely ny coefficient fampandehanana hafanana, dia misy vokany amin'ny ririnina mafana sy fahavaratra mangatsiaka. tena tsara). Na inona na inona mandavantaona, na rahoviana na rahoviana, raha hipetraka ambonin'ny gorodona hazo ilay olona, ​​afaka mahazo aina tsara, tsy hanana fahatsapana mangatsiaka sy mangatsiaka, indrindra fa ny fianakaviana manan-janaka ao an-trano. Ny fikarohana siantifika dia naneho fa ny fiainana maharitra amin'ny trano hazo dia afaka manitatra ny fiainana amin'ny 10 taona eo ho eo.
Mafana amin'ny ririnina ary mangatsiatsiaka amin'ny fahavaratra
Amin'ny ririnina, ny mari-pana ambonin'ny gorodona hazo mafy orina dia 8 ℃ ~ 10 ℃ avo kokoa noho ny an'ny taila tanimanga, ary mandeha amin'ny gorodona hazo ny olona nefa tsy mahatsapa hatsiaka; Fahavaratra, ny maripanan'ny efitrano fatana amin'ny gorodona hazo tena izy dia tokony ho ambany noho ny maripanan'ny efitrano misy taila tanimanga 2 ℃ ~ 3 ℃.
Maitso tsy maninona
Ny gorodona vita amin'ny hazo tena izy dia nalaina avy tamin'ny ala taloha tamin'ny fitaovana, ampiasao ny loko vita amin'ny loko tsy mahazaka lamba izay tsy manao firaisana ara-nofo, zava-maniry avy amin'ny fitaovana ka hatramin'ny loko mandoko ny maitso rehetra sy tsy mampidi-doza, tsy mitovy amin'ny taila vita amin'ny seramika misy taratra, koa tsy mitovy amin'ny fampiroboroboana gorodona mba hanana formaldehyde, maitso voajanahary ary fitaovana fananganana tany tsy mampidi-doza.